Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247600 times)
« Reply #370 on: July 22, 2011, 11:05:35 AM »
" သိ ကြ ရော ပေ့ါ "
အရာရှိကြီး၏ ရုံးခန်းရှေ့ တွင် ထိုင်နေသော စာရေးကို သန့် ပြန့် စွာ
၀တ်စားထားသော မိန်းမချော တစ်ဦးက မေးသည် ။
" ရှင့်တို့ဆရာကို တွေ့ လို့ ရမလား ဟင် "
" ဒီလို ချောမောလှပတဲ့ မိန်းခလေးမျိုးကို ဆရာက ချက်ချင်း လက်ခံ
တွေ့ ဆုံလေ့ ရှိပါတယ် ခင်ဗျ.. ဘယ်တော့မှ အပြင်မှာ စောင့်ခိုင်းထား
လေ့ မရှိပါဘူး... "
" ဟန်ကျလိုက်တာ..... အဲ့ဒါဆို ပြောလိုက်စမ်းပါ.. သူ့မိန်းမ ရောက်လာ
တယ်လို့ .. "
« Reply #371 on: July 23, 2011, 09:54:46 AM »
ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့အလည်သွားရာမှ ပြန်လာသော နီကိုလိုင် က
မိမိ အတွေ့ အကြုံများကို မိတ်ဆွေများအား ပြောပြသည် ။
" သူတို့ ဆီမှာ အရာခပ်သိမ်း စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ချည်း လုပ်ထားပါ
လား...၊ ကျနော် တည်းတဲ့ ဟိုတယ်မှာဆိုရင် အခန်းထဲမှာ ရှိတဲ့
ခလုတ် ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့မိန်းမချောလေး တစ်ယောက်ပေါ်
လာပြီး " ဘာလိုချင်ပါလဲရှင်.. လူကြီးမင်းရဲ့ ဆန္ဒအားလုံးကို ကျမ
ဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်.." လို့ပြောတယ်ဗျ.. "
" တယ်ဟုတ်ပါလား အဲ့ဒါဆို ခင်ဗျား နည်းနည်းတော့ ပျော်ခဲ့မှာပေ့ါ "
" နည်းနည်း ဟုတ်လား... ကျုပ် တစ်ပါတည်း ယူလာခဲ့တယ်ဗျ.. "
" မိန်းမချောလေး ကိုလား "
" ဟင့် အင်း. ခလုတ် "
« Reply #372 on: July 23, 2011, 10:01:14 AM »
" ကျေး ဇူး တင် လိုက် တာ "
ပိန်ဆေး ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော ဆေးကုမ္ပဏီသို့စာတစ်စောင်
" လူကြီးမင်းတို့ ၏ ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော ပိန်ဆေးသည်
အထူး အစွမ်းထက်လှပါသည် ။ ကျနော်၏ ဇနီးသည် ပထမ ၁၄ ရက်
အတွင်း ခြောက် ကီလို တိတိ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့သွားပါသည်။
တစ်ပုလင်း ကုန်သောအခါ အိမ်မှ လုံးဝ ပျောက်သါားပါသည် ။ ဤ
အတွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ "
« Reply #373 on: July 23, 2011, 10:16:17 AM »
" လူ ပါး "
လူနာ နှစ်ယောက် စကားပြောနေကြသည် ။
" ခင်ဗျား.. တော်တော် ခံနိုင်ရည် ရှိတဲ့သူပဲ..။ ခင်ဗျားရဲ့နာနေတဲ့
ခြေထောက်ကို သူနာပြုဆရာမ က နှိပ်ပေးတာတောင် တစ်ချက်
လေးမှ မအော်ဘူး.. "
" ကျုပ်က အရူးမှ မဟုတ်ပဲ.. နာနေတဲ့ ခြေထောက်ကို ဘယ်ထိုးပေး
" ရှေ့နေ ပေး တဲ့ အ ကြံ "
" မောင်မင်း ရုံးတော် ရှေ့ မှာ ရှိုက်ကြီးတစ်ငင် ငိုနေတာကို
ရပ်လိုက်စမ်းပါ.. .... ငိုပြနေလို့ရုံးတော်က မောင်မင်းကို
သနားလိမ့်မယ် မထင်နဲ့ .. "
" သိပါတယ် ခင်ဗျာ... ကျနော့် ရှေ့ နေက အကြံပေးလို့ ပါ.... "
« Reply #374 on: July 23, 2011, 10:24:31 AM »
" ကပ် စေး နှဲ ယော င်္ကျား "
ည အချိန်မတော် ဖြစ်သည် ။ မှောင်နေသော လမ်းအတိုင်း လင်မယား
နှစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာကြသည် ။ ကွေ့တစ်ကွေ့တွင် လူဆိုး
တစ်ယောက် ပုန်းနေရာမှ ထွက်လာပြီး ယောင်္ကျားကို ခြောက်လုံးပြူး
နှင့် တေ့သည် ။ " လက်မြှောက်.. ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံ အကုန်ထုတ်စမ်း " ဟု
ခြိမ်းခြောက်သည် ။ ယောင်္ကျားဖြစ်သူသည် လက်ကို အောက်သို့ ချလိုက်
ပြီး အိတ်ထဲမှ ပိုက်ဆံများကို ထုတ်ယူသည် ။ ထို့ နောက် လူဆိုးကို ကမ်း
ပေးလိုက်သည် ။ ဤသည်ကို မြင်သော မိန်းမက မကျေမနပ် ပြောသည်။.
" ဒါမျိုးကျတော့ ရှင့်မှာ ပိုက်ဆံ ရှီတယ်ပေ့ါလေ.ကျုပ် အင်္ကျီတစ်ထည် ၀ယ်
ပါရစေ ဆိုတော့ ပိုက်ဆံ မရှိဘူးတဲ့ ဟင်း.. "
« Reply #375 on: July 23, 2011, 10:34:13 AM »
" ၀မ်း စ မိုး Once More "
ဆရာဝန်များ.. ဆေးကျောင်းသားများဖြင့် ပြည့်ကျပ်နေသော ခန်းမကြီးထဲတွင်
မုတ္တ ရောဂါ စွဲကပ်နေသော လူနာကို လူငယ် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က ခွဲစိတ်ပြသည် ။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သည် ခွဲစိတ် ကိရိယာများကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်ကာ ကြီး
နေသော ဝှေးစေ့ကို ခွဲသည် ။ အခန်းထဲရှိ ပရိတ်သတ်များ စိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်
သည် ။ လူငယ်ဆရာဝန်သည် ခွဲစိတ်မှုကို အောင်မြင်စွာ အဆုံးသတ်လိုက်သည် ။
ကြည့်နေသူများ ထံမှ " ၀မ်းစမိုး..၀မ်းစမိုး.. " ဟူသော အော်သံများဖြင့်အတူ လက်
ခုပ်သံများ ဆူညံစွာ ပေါ်ထွက်လာသည် ။ လူငယ်သည် ပရိတ်သတ်ကို ဦးညွတ်
အလေးပြုလိုက်သည်..။ ထို့ နောက်....
ကောင်းနေသော နောက် ဝှေးစေ့ ကို ထပ်ခွဲ လိုက်သည် ။
« Reply #376 on: July 23, 2011, 10:45:12 AM »
" အိမ် ထောင် သည် ဘ ၀ "
" မင်း အိမ်ထောင်ကျတာ နှစ်လပဲ ရှိသေးတယ်.. မိန်းမရတဲ့ အရသာလေး
ပြောပြစမ်းပါဦး ကွ. "
" စိတ်ညစ်စရာကြီးပါကွာ... ဆေးလိပ် မသောက်ရ..အရက်မသောက်ရ..လောင်း
ကစား မလုပ်ရ.. ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းလဲ မပြုရနဲ့မလွတ်လပ်ပါဘူးကွာ.. "
" ဟင်.. ပျင်းစရာကြီးပဲ.. "
" အေး...င့ါကို ပျင်းခွင့်လဲ မပေးဘူးကွ... "
" အ ရေး ကောင်း ဒိန်း ဒေါင်း ဖျက် "
" ဟေ့..ဂျွန်.. မင်း မျက်နှာက စိတ်တိုနေတဲ့ ပုံပါလားကွ..ဘာဖြစ်လို့ လဲ..."
" ညက အင်မတန်ချောတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အသိအကျွမ်း ဖြစ်
တယ်လို့ငါ အိပ်မက် မက်တယ်.. "
" အဲ့ဒီတော့.... "
" သူ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ငါ လိုက်ရေးနေတုန်း မိန်းမက နှိုးလိုက်လို့ ဟေ့.. "
« Reply #377 on: July 23, 2011, 10:58:33 AM »
" မူး နေ လို့ပေါ့ "
" တရားခံ နီကိုလိုင် ..မစ္စတာ အီဗန်ရဲ့ခေါင်းကို ဘီယာခွက်နဲ့ထုလိုက်ချိန်မှာ
ခင်ဗျား မူးနေတယ်ဆိုတာ သက်သေ ပြစမ်းပါ.. "
" ရှင်းနေတာပဲ... ကျနော်သာ မူးမနေဘူး ဆိုရင် ဘီယာကို ဘယ်အဆုံးခံမလဲ..
ခွက် အလွတ်နဲ့ထုလိုက်မှာပေါ့....."
" မ ပြော တော့ ဘူး "
တရားစွဲခံရသည့် အမျိုးသမီးက ရုံးတော်တွင် ခံဝန်ချက် ပေးသည် ။
" ကျမရဲ့အိမ်နီးချင်းနဲ့သင့်သင့်မြတ်မြတ် နေဖို့ကျမ ကတိပြုပါတယ်
ဒီ ပြိတ္တာမကြီး အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခွန်းမှလည်း မဟတော့ပါဘူး "
« Reply #378 on: July 25, 2011, 10:03:06 AM »
" နွား ရိုင်း သတ် ပွဲ corrida "
စပိန်နိုင်ငံတွင် နွားရိုင်းသတ်ပွဲသည် အလွန်နာမည် ကြီးသည် ။ နိုင်ငံခြား ဧည့်သည် တစ်ဦးသည်
ဤပွဲကို ကြည့်ရန်အတွက် စပိန်သို့တကူးတက ရောက်လာသည် ။ နွားရိုင်းသတ်ပွဲပြီးသောအခါ
အားကစားရုံအနီးရှိ စားသောက်ဆိုင်သို့ဝင်ကာ စားပွဲထိုးကို ခေါ်သည် ။ ယနေ့ ရနိုင်သော အစား
အစာများကို မေးရာ ဝှေးစေ့ကြော် ( Fighting Ball ) တစ်ခုသာ ရမည်ဟု စားပွဲထိုးက ပြောသည်။
ဆာလည်း ဆာနေသည်နှင့် ဘာဖြစ်ဖြစ် ဟု သဘောထားကာ ၄င်း အကြော်ကိုပင် မှာလိုက်သည် ။
ခဏကြာသောအခါ ပန်းကန်ပြားကြီးနှင့် ဝှေးစေ့ကြော်ကို ဘွိုင်က ယူလာသည် ။ " အင်မတန်ကြီး
တဲ့ ဝှေးစေ့ ပါလား " ဟု စိတ်ထဲတွင် တွေးသည် ။ တစ်ခြား စားစရာလည်း မရှိ ။ အစာအိမ်ကလဲ
တောင်းဆိုနေသည်နှင့် ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ လာချပေးသည်ကို အားရပါးရ လွေးလိုက်
နောက်တစ်နေ့နွားရိုင်းသတ်ပွဲကို ထပ်ကြည့်သည် ။ ပွဲပြီးသောအခါ မနေ့ ကအတိုင်း စားသောက်
ဆိုင်သို့ဝင်သည် ။ ဒီကနေ့ လည်း ဝှေးစေ့ကြော် တစ်ခုပဲ ရကြောင်း တွေ့ ရပြန်သည် ။ " မနေ့ က
စားလို့ ကောင်းသားပဲ " ဟု တွေးကာ ဘာမှ မပြောတော့ပဲ " ယူခဲ့ပါ " ဟု မှာလိုက်သည် ။ ယခု
တစ်ခါ စားပွဲထိုး ယူလာသော အကြော်မှာ မနေ့ ကထက် များစွာ ငယ်နေသည် ။ သိလိုသဖြင့် စား
ပွဲထိုးကို မေးသည် ။
" ဟေ့ ဘွိုင် မနေ့ က အကြော်က ကနေ့ ဟာထက် အများကြီး ကြီးတာပဲ... ဒီကနေ့ဘာဖြစ်လို့ သေး
" ဒီလိုပါ ခင်ဗျာ.. ၊ နွားရိုင်းသတ်ပွဲရဲ့သဘောက အမြဲတမ်း နွားသတ်သမားချည်း နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး
တစ်ခါတစ်လေ နွားရိုင်းက လူကို အနိုင်ရတာလဲ ရှိပါတယ် ခင်ဗျ. "
« Reply #379 on: July 25, 2011, 10:42:44 AM »
" ဉာဏ် စမ်း ပြိုင် ပွဲ "
စာမေးပွဲခန်းတွင် ဖြစ်သည် ။ မေးခွန်းများပါသော မဲလိပ်ကို ပါမောက္ခက ကျောင်းသား
တစ်ဦးချင်းအား နှိုက်ခိုင်းပြီး အထဲတွင်ပါသော မေးခွန်းတို့ ကို နှုတ်ဖြင့် ဖြေခိုင်းသည် ။
ကျောင်းသားတစ်ယောက် မဲလိပ်ကို နှိုက်လိုက်သည် ။ မဲလိပ်ထဲတွင် မေးခွန်း သုံးခု ပါ
သည်ကို တွေ့ ရသည် ။ မည်သည့်မေးခွန်းကိုမှ မိမိ ဖြေနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း သိသော
ကျောင်းသားက ပါမောက္ခကို ပြောသည် ။
" ဆရာ....ကျနော် ရတဲ့ မဲလိပ်ထဲမှာ. မေးခွန်း သုံးခု ပါပါတယ်..၊ ကျနော် အဖြေ မသိပါဘူး
ဒါပေမဲ့ တရားမျှတမှု ရှိအောင် ကျနော် အကြံပြုချင်ပါတယ်. ၊ ကျနော် ဆရာ့ကို မေးခွန်း
သုံးခု မေးပါမယ်...၊ ဆရာ ဖြေနိုင်ရင် ကျနော့်ကို ၂ မှတ်ပဲ ပေးပါ..။ ကျနော် သဘောတူ
ပါတယ်...။ အဲ..ဆရာ မဖြေနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ကျနော့်ကို ဂရိတ်ဖိုက် ပေးရမယ်... "
" စိန် လိုက် "
" ယုတ္တိ မရှိဘူး..၊ ဒါပေမဲ့ တရားဝင်တယ်....။ တရားမ၀င်ဘူး.. ဒါပေမဲ့ ယုတ္တိ ရှိတယ် ။
နောက်ဆုံးတစ်ခုက ယုတ္တိလည်း မရှိဘူး...၊ တရားလည်း မ၀င်ဘူး..တဲ့.. ။ တစ်ခုချင်းကို
အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ပါ ဆရာ..."
ပါမောက္ခ မဖြေနိုင်ချေ..။ သို့ ဖြင့် ကျောင်းသားကို ဂရိတ်ဖိုက် ပေးလိုက်ရသည်။
" အဖြေက ဒီလိုပါ ဆရာ..၊ ဆရာက အသက်ကြီးပြီ..၊ ဒါပေမဲ့ မယားငယ်ငယ်လေးကို ယူ
ထားတယ်..။ တရားဝင်တာတော့ ဟုတ်ပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ ယုတ္တိ မတန်ဘူး..။ ဒီအမျိုးသမီး
ငယ်ဟာ တိတ်တိတ်ပုန်း ယောင်္ကျား ထားမှာပဲ...။ ဒါဟာ ယုတ္တိ တန်တယ်.. ဒါပေမဲ့ တရားမ
၀င်ဘူး...။ အဲ.... ပြီးခဲ့တဲ့ မိနစ်ပိုင်းကပဲ အဲ့ဒီ တိတ်တိတ်ပုန်း ယောင်္ကျားကို ဆရာ ဂရိတ်
ဖိုက် ပေးလိုက်တာတော့ လုံးဝ ယုတ္တိ မရှိဘူး...၊ တရားလည်း မ၀င်ဘူး ခင်ဗျ...."